Dhammaan wararka ku saabsan cusbooneysiinta muddada dheer ee naga Mid ah | Androidsis
Dhamaan wararka ku saabsan cusbooneysiinta mudada dheer ee naga mid ah
daniplay | | Ciyaaraha Android
Dhexdayada ayaa ah guul guud kadib taageerada weyn ee ka timid youtubers, Kuwaas oo soo daabacay cinwaan la sii daayay Juun 2018. Ciyaartan fiidiyowga ah waxaan u dhaqmi doonnaa sidii Crewmembers ama sidii Dhoobolayaal, madadaalo ayaa ah in lagu ogaado mid ama labadaba Ciyaaraha ciyaarta.
Waqti xan ah kadib khariidada cusub ayaa la sii deyn karaa horaanta bisha Janaayo, waxaa lagu xamanayaa inay tahay Janaayo 7, oo kaliya afar maalmood laga joogo. Saaxiibkeen Milyaneerka Bisad ayaa kahadlaya arinkaas, isagoo siinaya horudhac waxkasta oo aan ku arki doono khariidada cusub, taas oo noqon doonta mid aad u balaaran isla markaana leh howlo badan oo laqaban doono.
1 Dhamaan waxa ku saabsan khariidada cusub
2 Kordhinta ciyaartoyda ciyaar kasta iyo wararka kale
3 Waxaa la sii deyn doonaa bisha Janaayo
Dhamaan waxa ku saabsan khariidada cusub
Hawlaha waxay noqon doonaan ku dhowaad 30 in la dhammaystiro Kooxda, cabbirka khariidadu aad buu uga ballaaran yahay, wuxuu dareemi doonaa cabsi badan waxaana jiri doona aagag aad u labyrinthine ah. Kaarka horay u soo maray mid ka mid ah khariidadaha ayaa naga caawin doona inaanu albaabbada furno, oo lagama maarmaan u ah inaan rabno inaan tagno aag.
Maqafilayaashu way ka faa'iideysan karaan tan iyagoo awood u leh inay ku xiraan aag oo ay cararaan, ku kharibaan aagagga la heli karo, iyo waxyaabo kale. Waxaa sidoo kale jira hadal ah inaan heli doonno qaybo badan oo aan kala dooran karno marka laga reebo Shaqaalaha Kooxda iyo kuwa Imbaradaro, magaca gaarka ah lama yaqaan xilligan.
Hackers waa lala dagaallami doonaa mustaqbalka fog, tan waxaa loo sheegay in moderators lagu dari doono ciyaarta si loo xakameeyo inay jiraan khiyaamo. Waa wax bulshada ay ka cabanaysay bilihii la soo dhaafay khiyaanooyinkana waa lala dagaallami doonaa maadaama ay jebiso ciyaar aad u qurux badan oo la qabatimo.
Kordhinta ciyaartoyda ciyaar kasta iyo wararka kale
Sidoo kale macluumaadka ay bixiso Milyaneer Bisadu Wuxuu ka hadlayaa sida aan ku heli doonno koror ciyaartoy ciyaar kasta, iyadoo ka socota 10 ilaa 15 ka qaybgalayaasha. Cayaartu waxay kordhin kartaa muddada iyo gaar ahaan in la dhammaystiro ku dhowaad 30 hawlood haddii aad rabto inaad ku guuleysato kuwa been abuurka ah ee laga baqo.
Mid ka mid ah waxyaabaha cusub ee muhiimka ah ee ay ku kordhin doonaan waqti ka dib ayaa ah darajooyinka, waxaan awood u yeelan doonnaa inaan la ciyaarno ciyaartoy leh heer la mid ah kuweenna. Tani waa qayb muhiim ah oo macluumaad ah haddii aanaan rabin inaan ka hor tagno heerarka sare kuweena ama si kale, oo qaarkood leh heer ka hooseeya kaayaga.
Waxaa la sii deyn doonaa bisha Janaayo
Taariikhda la filayo waa Janaayo 7, inkasta oo soo-saarista ay ku xirnaan doonto meheradaha waxayna imaan kartaa maalin ama laba kadib. Aad ayaan ula socon doonnaa macluumaadka uu saaxiibkeen na siiyay Bisad Milyaneer ah oo waxaan ku cusbooneysiin doonnaa dhammaan wararka khariidadda soo socota ee heleysa magaca The Airship.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Dhamaan wararka ku saabsan cusbooneysiinta mudada dheer ee naga mid ah
Sida loo saxeexo shaashadda qufulka ee Huawei EMUI
Cusbooneysiinta Android 11 ee loogu talagalay Xiaomi Mi A3 waxay ka tagi kartaa moobilka aan la isticmaali karin